QOYS BA’AY, AROOS QARAN U DHIG.!!! | Wardoon Wardoon.net - Somali News
QOYS BA’AY, AROOS QARAN U DHIG.!!!
Dadka qaarkood ayaan arkayaa oo Gubistii xanuunka badneyd iyo geeridii xigtay ee Axmed Dowlo iyo Dilalka kalee laga yaabo inay ka dambeeyaan uu kala weynyahay Jaceylka adduunka ugu nasiib xun ee ka dhaxeeya Maxamed C/raxmaan Mukhtaar iyo Ruqiya Cabdullaahi Maxamed.
Dadoow, horta xog badan ma heysaan oo ma isweydiiseen in Reerkani aroos Qaran ka suurtaabo.?
Maxamed, Adeerkii jaceylkiisa dartii ayaa loo dilay, agoon badanna waa ka tagay, haddii qof carruurtaas koriya uu jiri karana Maxamed ayaa ay tahay inuu noqdo oo mas’uuliyad gaar ah isa saaro. Ma joogo maalin uu Tv yada kasoo muuqdo isagoo dhoollacaddeynaya, isaga oo ay kor iyo bari u sidaan Dad musiibada reerahiisa/xigto iyo xidid ba ku habsatay uu kala weynyahay Jaceyl dhiig dhex yaalla.
Ruqiya, iyada maskaxiyan inay caafimaad qabto anigu uma arko. Maxay jaceyl ka hadashaa….? Marka ay sababteeda geeri xanuun badani ku dhacday…maxay sida Model ugu labisataa marka ay geeri kale gondaheeda taal ?. Maxay dhoollacaddeysaa marka ay filan karto 3 ka mid ah Walaalaheed ku hooyo ah, labo Wiil iyo Gabar dilka Axmed Dowlo wax ka fuliyey iyo Habaryateed Hooyadeed la dhalatay intaba Tiirka la geeyo oo la dilo.?
Marka hooyadeed oo Fitnada taagan iyada loo aaneynayo Xabsi dheer ku dhex gabowdo….marka ay Ruqiya nafteedu curato oo ay Carruur dhasho ayaa iyaduna ah Xanuun kale oo aan waligii suulin.
Xildhibaan Cabdi Shire Ciyaar jecel, kuma cambaareynayo aragtidiisa ah in Aroos Qaran Ilmaha nasiibka daran loo dhigo, waxaanse leeyahay Dareenkaagu waxba ma dhaammo kan Carruurta hadda qaangaari rabta ee sideey Filim Hindi ah u daawanayeen, Atariishada ninka faqriga ah jecel ee loo diiddanyahay marka ay ooydaba iyana la ilmeeya ee
JACEYLKU HA XUROOBO….HA XUROOBO ka daba dhaha.
Kaba soo qaad in aroos Qaran loo dhigay oo quursiga lagula kacay darteed loo maamuusay lammaanahan garaadkoodu wali gaabanyahay, aan ku weydiiyee maxaad ka maleysaneysaa berri? Reer bulaalay mise reer ba’ay. Anigu tan dambe ayaan ku sifeyn lahaa..Adiguna?.
Maxaa xal ah.?. Qoyskan dhallinta yari, marka ay iyagu sababaan Geerida 5 qof oo Qoyskooda ah ( haddii aan Diyo lagu heshiin), maxaa adduunka u yaalla oo ay sugayaan…sida Jaceylkooda loo faquuqay ayey waligood Bulshada soomaaliyeedna uga soocnaan doonaan, inyaroo Dhoocillo jaceylka ka beensheega iyo Odayaal u camira ma ahee, Sumcad Bulshada kuma dhex yeelan doonaan.
Waxaan haddaba ku talin lahaa, si mashaqadan xal maxkamadeed looga gaaro, Qisaas ama Diyo, in kow lammaanahan la kala diro oo guurkooda lasoo afjaro, si labada Qoys u noqdaan dad aan xidid ahayn oo xuguntami kara.
Haddii ay taasi dhici weydo in ay Magaalada isaga haajiraan oo meelo kale oo aan laga aqoon iska degaan iyagoo Magacyo cusub wata, si ay wajiga uga dad badaan Qoyskooda iyaga u arka Bar madoow oo waligeed ku taal.
FG: Sawirradooda inaan isticmaalo waan ku dhiirran waayey, sababtoo ah Fasax uma qabo.
Aragtideyda gaarka ah.